Lo mshini ukwaluka bekulokhu ethandwa kakhulu emakethe futhi ngothando eyaziwa njenge "Xinchang braider". Ukuthola lokhu idumela nolimi ukwenyuka kwezinga lobu buchwepheshe iminyaka eminingi emakethe.
Kusukela ekusungulweni yayo ngo-1998, inkampani iye ukugxila ukukhiqizwa wire ukwaluka imishini nemishini hose ukwaluka. Okwamanje, ikhiphe ezihlukahlukene models tintfo letitinhlobonhlobo. Eminyakeni eminingi kokuhlinzwa, sedimented idatha yomkhiqizo kuyinto umcebo Irreplaceable kulo mshini ukunitha.
Emkhakheni wezingalo imishini, ukukhiqizwa kwanoma umkhiqizo nokusebenza kakhulu kudinga okuqhubekayo umkhiqizo amaphutha kanye nokulungisa okuqhubekayo. I samanje umshini ubuchwepheshe uye zanqwabelana idatha okungaphezulu kakhulu kwalokho okungakulahlekela ontanga yayo futhi uye zanqwabelana isipiliyoni ocebile ekukhiqizeni, ukugcinwa kanye nezinye izici. Lezi idatha kungasiza amakhasimende ethu ngokushesha faka isimo ukukhiqizwa ephumelelayo, ekuqedeni ukukhathazeka ikhasimende kuzo zonke izici yesondlo kanye nokugcinwa.
Njengamanje, esekelwe lezi idatha, inkampani isivele eyenziwa ezinye ukunitha ezihlobene umshini emsebenzini wenkonzo. Kukholakala ukuthi le misebenzi uzokwenza database umshini ukunitha eningi kakhudlwana, futhi lokho kuzokwenza ukuthi lo kukhanye nobuchwepheshe ukunitha imishini ensimini.